Iphepha elitsha lohlobo lwePhepha kunye neeNtsana zaBantwana, ukubheja kweAmazon koku kuwa | Zonke iiReaders
Iphepha elitsha lohlobo lwePhepha kunye neeNtsana zaBantwana, ukubheja kweAmazon koku kuwa
UJoaquin Garcia | 22/09/2021 16:30 | Amazon Kindle, eReaders
IAmazon ityhile izixhobo zayo ezintsha zokufunda izolo emva kwemini kodwa ngendlela esemthethweni ngakumbi namhlanje Ngoku siyazibona iimpawu kunye nefayile ye Iphepha elitsha lohlobo lwePhepha kunye noHlelo loTyikityo lwePhepha.
Kodwa iAmazon nayo yatsala isimanga esitsha esasingenayo kumarhe asemthethweni, enye yazo icandelo labantwana abathandekayo eyenziwe ngezixhobo ezininzi zeAmazon ezijolise kwelona candelo lisekufundeni labantwana.
Kule meko sine Uhlobo oluSisiseko kunye neeMpawu kunye nohlengahlengiso lwabantwana ekuthiwa Kindle Kids sikwanazo Uhlobo lwePhepha eliMhlophe labantwana yintoni efanayo kodwa ngesixhobo esitsha Kindle Paperwhite kwaye emva koko sinenkonzo yokubhalisela kwisitayile se Suka Unlimited eya kuvumela ukuba incinci yendlu ifunde iincwadi kunye neencwadi kwifomathi yedijithali.
Ke, ngokuqinisekileyo, iAmazon ihlaziya imodeli yayo yohlobo lwePhepha, kodwa ayenzi njalo kunye nezinye iimodeli, ishiya bucala okomzuzwana i-Basic Kindle kunye ne-Kindle Oasis.
Ukuvuza okwenziwe kwiintsuku ezimbini ezidlulileyo kwiwebhusayithi yeAmazon Canada kuzalisekisiwe kodwa kukho izinto esingazaziyo ukuba namhlanje sinokuvumelana kwaye sibhengeze. Ibhetri kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo kukugqibela kananjalo, ukuze kungabikho ngxaki yokutshaja, IAmazon ibandakanye i-usb-c port, kushiya ecaleni izibuko lempahla eliqhelekileyo. Ukuziqhelanisa kungangabinangxaki ukusukela ngekhe sikwazi ukusebenzisa itshaja endala yomfundi kodwa kufuneka sithenge eyahlukileyo. Nangona kunjalo, iipakethi zokufunda ezinesembozo zibandakanya itshaja, ke xa befika eSpain, kanye njengoko iAmazon Spain ibandakanya itshaja kwisixhobo sakho.
El Uhlobo loPapasho oluTyikityiweyo lwePhepha akhawunti basazisile njani ngokutshaja ngaphandle kwamacingo kunye ne-usb-c port. Kule meko kukho ipakethe yokugubungela, kunye nesifundo sokufunda kunye kwitshaja engenazingcingo enexabiso kwi $ 239.
Kwakhona, IAmazon itshintshe imigaqo-nkqubo yayo yokusingqongileyo kolu khululo, iyenza icace into yokuba izixhobo zenziwe ngezinto ezinokuphinda zisetyenziswe, kunye ukupakishwa kwendalo kunye nethuba lokuphinda usebenzise kwakhona okanye unike ubomi besibini kwi-ereader endala ukuba ufuna ukuyitshintshela kwi-Kindle Paperwhite entsha.
Uhlobo lwabantwana luphucula kakhulu ukuze abantwana bakonwabele ukufunda
Kodwa eyona nto indithathele ingqalelo kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo iya kuba lukhuthazo olukhulu ku-Kindle ecosystem kukuqwalaselwa kwabancinci.
IAmazon ipapashe kwaye yaphucula inkonzo yayo yabantwana abane Kindle Kids esebenza njenge Kindle Unlimited kodwa nge iincwadi ezilungele abantwana. Ukongeza, izixhobo zine-software ekhethekileyo evumela utata okanye umama ukuba anciphise ukusetyenziswa kwesixhobo, ebonisa ixesha apho isixhobo siyeke ukusebenza khona ukuze umntwana amisele iishedyuli, thintela ukufundwa okuthile okanye uhlengahlengise isivamvo sokukhanya.
Kunye nezi nguqulelo kunye neemodeli ezintsha kuvela uthotho lwezembozo ezinezinto zabantwana nezolutsha ezixhasa abafundi ezinokuthengwa ngokwahlukeneyo kodwa ngokudibeneyo, kubandakanya itshaja ye-usb-c.
Okwangoku azifumaneki ukuba zithengiswe kuba azikabikho kuwo onke amazwe. Ixabiso le Imodeli eqhelekileyo yi- $ 139, umzekelo Isayinitsha yohlobo lwePhepha lePhepha yi- $ 159 Imodeli yohlobo lwabantwana eneziqweqwe zazo zii- $ 159 kunye ne- $ 109 yeePhepha zeWhite kunye neemodeli ezisisiseko zohlobo ngokulandelelana.
IAmazon ishiya unxibelelwano lwe4G kunye neentengiso?
Uhlobo lwabantwana luyinto entsha, kodwa ukuba ungabasebenzisi abazi iAmazon ukusuka kuhlobo lokuqala kwaye undwendwele iwebhu, uya kubethwa yinto yokuba IAmazon igxininisa kwaye inyanzelisa ukuthengwa kuhlobo lwePhepha lePhepha ngaphandle kweentengiso, kude kube ngoku bekungekho njalo. Nokuba kuyinyani ukuba umahluko awukho mningi kwaye intengiso ayisiyongxaki, ayiyeki ukutsala umdla.
Kwakhona, Olu hlobo lwePhepha lePhepha elimhlophe aluyi kuba nohlobo lwe-4G, oko kukuthi, Siza kusoloko sidinga uqhagamshelo ngaphandle kwamacingo ukuze ukwazi ukukhuphela ii-ebook, iindaba okanye ukuthenga. Ngelixa kuyinyani ukuba yinto eluncedo kwiAmazon, kuyinyani ukuba lo msebenzi uza ngexabiso elikhulu kwinkampani Kwaye ukuba abathengi abayisebenzisi kakhulu, ekugqibeleni iba kukutsala kwinkampani. Kungenxa yoko le nto kwiinyanga nje ezidlulileyo iAmazon ikhetha ukukhubaza eli nqaku kwaye ingayiphumezi kwizixhobo ezitsha.
Okwangoku asazi umhla wokuthengwa okunokwenzeka eSpain, nangona kwintengiso yase-US ziya kufumaneka ukusuka nge-28 ka-Okthobha Kodwa emva kokumiliselwa okukhawulezileyo emva kocociso, ndicinga ukuba kungekudala sizokwazi ukuba nesi sixhobo kwimarike yaseSpain, ethi nangona kukho iipilisi, isisixhobo esihle sokufunda kunye neeyure zokuzonwabisa Ngaba awucingi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Zonke iiReaders » iinkampani » Amazon Kindle » Iphepha elitsha lohlobo lwePhepha kunye neeNtsana zaBantwana, ukubheja kweAmazon koku kuwa
Uhlobo loPapasho oluTyikityiweyo lwePhepha, umfundzi omtsha ovuza ngempazamo